🥇Uyithenga njani i-Ethereum kwi-Intanethi kaJanuwari 2022 | Funda ngokupheleleyo isiKhokelo soRhwebo esi-2!
Uyithenga njani i-Ethereum 2021
Ngokubhekisele kwiimveliso ze-crypto ezisasazekileyo, i-Ethereum yenye yezona zinotyalomali olusebenzayo kwilizwe jikelele. Ngokungafaniyo nobungqina-bomsebenzi osetyenziswa yiBitcoin, le nethiwekhi kutsha nje ubungqina-besitokhwe-esenza ukuba inqweneleke ngakumbi.
Ukuba ufuna ukwazi indlela yokuthenga i-Ethereum kwinduduzo yasekhaya-hlala apho ukhoyo.
Namhlanje, singena kuyo yonke into ekufuneka uyazi xa utyala imali kwi-crypto-asethi eguqukayo. Ukuthatha ingqalelo ngeendlela ezahlukeneyo zokuthenga i-Ethereum, izicwangciso zotyalo mali, kunye nendlela yokufumana umrhwebi othenjiweyo.
Uyithenga njani i-Ethereum ngemizuzu eli-10-Isikhokelo somlilo ngokukhawuleza
Ngaphambi kokuba uthenge i-Ethereum, kuyakufuneka ujoyine urhwebo olunokuthi lula ukuthengwa kwakho. Ngamanye amagama, enye enokunika ukufikelela kwimarike ekuthethwa ngayo.
Ungakhathazeki ukuba awunalo ixesha lokufunda esi sikhokelo ngokupheleleyo ngoku - ukuba unomdla wokuqalisa, unokulandela isikhokelo somlilo esikhawulezayo apha ngezantsi.
Inyathelo 1: Intloko ngaphaya kwekhredithi Umthengisi weemali zedijithali - Inkunzi.com
ubamba iilayisensi ezivela kumagunya ama-3 kwaye ungathenga i-Ethereum ngaphandle kokuhlawula nayiphi na ikhomishini.
Inyathelo 2: Khetha 'Joyina ngoku' ukuvula iakhawunti-ngenisa iinkcukacha ezifunekayo kwibhokisi yokubhalisa kwiscreen sakho.
Inyathelo 3: Njengobungqina besazisi, layisha ikopi ecacileyo yesazisi sakho sefoto- njengepasipoti okanye iphepha-mvume lokuqhuba. Kuya kufuneka uthumele ubungqina bedilesi enje ngebhili yesixhobo okanye ingxelo yebhanki.
Inyathelo 4: Ukuxhasa iakhawunti yakho entsha, ngenisa imali onqwenela ukuyifaka kwaye ukhethe kwiindlela ezininzi zokuhlawula ezikhoyo kwiCapital.com. Nje ukuba wanelisekile- 'Qinisekisa'
Inyathelo 5: Khangela i-Ethereum kwaye ucofe u 'Urhwebo'. Ngoku unokwenza iodolo 'yokuthenga' kwaye ufake imali onqwenela ukuyithenga
Ugqibile ukwenza utyalo-mali lwakho lokuqala lwe-Ethereum kwi-Capital.com!
Khetha i-Ethereum Broker ethembekileyo
Njengoko sele kutshiwo apha ngasentla, uyakufuna umthengisi ukuze athenge i-Ethereum. Ukukusindisa iiyure zophando olunzulu, sinciphise ezona ziqonga zibalaseleyo ze-Ethereum ukuya kuthi ga ezintlanu.
1.I-AvaTrade-I-Ethereum Platform eneemfumba zeziXhobo zoHlahlelo lobuchwephesha
I-AvaTrade ibonelela ngokufikelela kwiimfumba ze-CFDs, ezigubungela i-Ethereum kunye nezinye i-cryptocurrensets, ii-indices, ii-ETFs, iimveliso, iibhondi kunye nezitokhwe. Zonke zinokuthengiswa ngaphandle kwekhomishini. Xa kuziwa kwizixhobo zohlalutyo lobuchwephesha-kukho intabalala kwi-AvaTrade. Oku kwenziwa ngamacebo amaninzi, izifundo, izikhombisi, izifundo ezithile zeasethi, izixhobo zokubala ezoqoqosho, kunye neAvaProtect.
Ukuba unomdla wokusebenzisa indawo yedemo yasimahla ngelixa ufunda indlela yokuthengisa i-Ethereum, i-AvaTrade ibonelela ngebhalansi ye- $ 10,000 kwimali yephepha. Ukuba, nangona kunjalo, ungathanda ukuqala ukurhweba usebenzisa imali yokwenyani isuswe, idiphozithi encinci yi- $ 100. Ngapha koko, ukuba ungumsebenzisi weMT4 ungaqhagamshela iakhawunti yakho yeAvaTrade ngokulula.
Ngenye indlela, ukuba ukhetha ukungakhupheli nayiphi na isoftware, ungabambelela kwiqonga labanini. Oku kubandakanya ukhetho olufanelekileyo lwezixhobo zokurhweba. Ukuba ungathanda ukuba nonxibelelwano xa uthengisa i-Ethereum, unokujonga usetyenziso lwe-AvaSocial. Eli nqaku lilungile ekufumaneni ulwazi ngemakethi kwiingcali nakwabanye abatyali-mali-kunye nokukunika ithuba lokuzenzekelayo urhwebo lwakho.
I-AvaTrade isebenza ngaphezulu kwamazwe e-100 kwaye ilawulwa yimimandla emininzi efana ne-UEA, uMzantsi Afrika kunye ne-EU. Kananjalo, unokulindela inkonzo ecacileyo nefanelekileyo. Ngapha koko, zininzi iintlobo zentlawulo ezamkelweyo. Oku kubandakanya ukuhanjiswa ngocingo, amakhadi amakhulu etyala, kunye nezipaji ze-e ezinje ngeQiwi, Neteller, Skrill, kunye neBoleto.
Ubuncinci bediphozithi kuphela yi-100
Umiselwe kwimfumba yeendawo kubandakanya iJapan, i-EU kunye noMzantsi Afrika
Ukufikelela kwi-Ethereum CFDs ngelixa uhlawula i-0% ikhomishini
Intlawulo yolawulo emva kweenyanga ezili-12 zokungathengisi
3.I-LonghornFX-I-ECN ye-Broker ephezulu-enexabiso eliphezulu
Cinga ngesiCwangciso sakho se-Ethereum
Ngaphambi kokuba ufunde kakuhle indlela yokuthenga i-Ethereum, kuyakufuneka ucinge malunga nokuba leliphi na icebo onokulithatha.
Jonga iindlela ezimbini eziqhelekileyo zokuthenga kunye nokuthengisa i-Ethereum engezantsi.
Thenga kwaye ubambe i-Ethereum
Indlela eyaziwayo yokufikelela kwiimarike ze-Ethereum kukusebenzisa isicwangciso sokuthenga nokubamba. Emva koko, oku kuya kukubona uthenga i-ETF kwaye ubambelele kwimali ezinkozo zedijithali kangangeenyanga okanye iminyaka ngexesha.
Malunga nokufikelela kwi-Ethereum ukuthenga, kukho iindlela ezahlukeneyo onokuzithatha. Umzekelo, unokuthenga i-Ethereum ngotshintshiselwano nge-imali yedatha, nangona kufuneka kuthiwe ezi zithuba zihlala zikhululekile kummiselo. Ngezizathu zokhuseleko, olona khetho lulungileyo kukuthenga iiasethi zekhompyuter ngerhwebo lokuthengisa elinelayisensi.
Ekugqibeleni, injongo yesi sicwangciso kukubambelela kwii-cryptocurrensets zakho de ubone ithuba elinokubakho elinenzuzo.
Jonga umzekelo okhawulezileyo apha ngezantsi:
Ixabiso le-Ethereum lixabisa kwi-1,770 yeedola kodwa ucinga ukuba kunjalo engaqwalaselwanga
Kananjalo, ubeka i $ 1,000 kuthenga umyalelo
Iinyanga ezili-11 zidlulile kwaye uqikelele ngokuchanekileyo- i-Ethereum inyuke nge-26% ukuya kwixabiso le- $ 2,230
Uchulumancile malunga neenzuzo zakho, uthatha imali yakho oyikhupha nge thengisa umyalelo
Ukusuka kutyalo-mali lwakho lokuqala lwe- $ 1,000, wenze inzuzo eyi- $ 260
Ngokubalulekileyo, xa usamkela esi sicwangciso, kubalulekile ukuba ujonge ukuba uza kwenza njani ivenkile iingqekembe zakho. Okokuqala, kukho ukhetho lokuzijonga ngokwakho nge-wallet yabucala ye-crypto.
Njengoko sele uyazi oku kuthetha ukuba unoxanduva lokugcina iingqekembe zakho zikhuselekile kubagculeli. Kuya kufuneka uzithembe ukuba ujonge isitshixo sangasese esinde esidingekayo ukufikelela kwi-Ethereum yakho.
Ngenye indlela, unokuyigcina i-Ethereum yakho kumrhwebi onqanaba eliphezulu njenge-eToro. Iqonga lilawulwa kwaye liya kukuvumela ukuba ugcine ngokukhuselekileyo iimali zakho ngaphandle kwemali eyongezelelweyo. Ngaphezulu, akukho mfuneko yokukhathazeka ngokufikelela kwi-Ethereum yakho - njengoko unokwenza imali ngokuthenga kwakho ngokulula, nangaliphi na ixesha.
Xa ujonga indlela yokuthenga i-Ethereum, kukwakhona ukhetho lokurhweba ixesha elifutshane ngeCFDs (Izivumelwano zomahluko). Kwabo abangaziyo, ii-CFDs zikwenza ukwazi ukuthembela ekunyukeni nasekuweni kwexabiso le-asethi-ngaphandle kokuba yeyakho.
Ukurhweba nge-Ethereum CFDs kubandakanya ukuqikelela ukonyuka okanye ukwehla kwezinga lokutshintshiselana ngezibini. Amacandelo amabini ahlukeneyo e-crypto-pair oza kuzibona kubarhwebi abakwi-Intanethi 'yi-crypto-fiat' kunye ne 'crypto-crypto'
Kwimeko apho ungazi, isibini se-crypto-fiat siqulathe imali yedijithali kunye neprintwe ngurhulumente. I-Ethereum ngokuchasene needola zase-US iboniswa nge-ETH / USD. Inokudibaniswa nee-euro, iiponti zase-UK, i-yen yaseJapan, iidola zase-Australia, kunye nokunye.
Ukurhweba ngababini be-crypto-crypto baya kukubona urhweba nge-Ethereum ngenye i-imali yedatha- njenge-Bitcoin. Oku kuya kuboniswa njenge-ETH / BTC. Ezinye izibini ezidumileyo ze-crypto-crypto yi-ETH / LTC (Litecoin) kunye ne-ETH / XRP (Ripple). Ngokubalulekileyo, akukho mabroker mabini afanayo, ke ukuba unomdla kwisibini esithile se-Ethereum, kubalulekile ukuba uqiniseke ukuba iyafumaneka kwiqonga lakho elikhethiweyo le-crypto.
Enye yezona zinto zinomtsalane malunga neeCFD kukuba zikwenza ukuba uhambe ixesha elide nelifutshane. U-Ergo, ukuba ucinga ukuba u-Ethereum ubhekisa kwi-nosedive ngokwexabiso-uya kuba nakho ukwenza inzuzo ekuweni kwexabiso layo.
Ngokubalulekileyo, iiCFD zinoxanduva lokulandela umkhondo wexabiso lokwenyani leasethi ekuthethwa ngayo ukuze ihlale ibonakalisa ixabiso lentengiso.
I-Ethereum ngokuchasene neTshayina yuan inexabiso nge-11,685
Kananjalo, ii-ETH / CNH CFDs nazo zixabisa i-11,685
Emva kokwenza uhlalutyo kwisibini, uyakholelwa ukuba kunjalo lixabisile
Ngenxa yoko, ubeka i $ 500 thengisa umyalelo
Kwiveki kamva i-ETH / CNH kuwa ukuya kwi-9,581-ebonisa ukwehla nge-18%
Ndonwabile ngenzuzo yakho eyi- $ 90 ($ 500 × 18%) - uphuma nge kuthenga umyalelo
Ukholelwe ukuba u-Ethereum uyakwenza njalo ulahlekelwe value, ke uhambe mfutshane. Oku kuyakwenziwa ngokubeka i thengisa odola kubarhwebi bakho obakhethileyo
Ukuba kwelinye icala ucinga iingqekembe ze-crypto ziya kuthi kuvuka ngexabiso, kuya kufuneka uhambe elide ngokwenza ifayile kuthenga umyalelo
Kwabo abangaziyo, ii-CFDs zikwenza ukuba ufake isicelo kumashishini e-Ethereum. Ubungakanani buboniswa njengomlinganiso okanye uninzi olunje nge-1: 5 okanye 5x kwaye ikwenza ukuba ukonyuse isibonda sakho. Kwimeko ye-1: 5, oku kuphakamisa indawo yakho ka-5.
Abanye abarhwebi banokufumana izandla zabo kubungakanani njengoko bafuna, abanye baya kuthintelwa. Oku kuxhomekeke ikakhulu kwindawo ohlala kuyo. EYurophu, umzekelo, ukunyusa kwi-crypto-asethi kufakwe kwi-1: 2. Oku kuthetha ukuba nge-100 yeedola, usenakho ukuvula indawo eyi- $ 200.
Jonga umzekelo wethu we-ETH / CNH wangaphambili, ngeli xesha ngokunyusa:
Emva kokwenza iodolo ye-500 yeedola kwi-ETH / CNH-usebenzisa 1: 2
Isikhundla sakho ngoku sixabisa i-1,000, XNUMX yeedola.
Kananjalo, xa esi sibini siwela nge-18 %- wenza inzuzo eyi- $ 180 endaweni ye- $ 90 ($ 1,000 * 18%)
Ngokukodwa, abemi base-US nase-UK abazukufanelekela i-crypto CFDs -kwaye nesimemo abasimemayo. Ngokubaluleke ngokokubaluleka, ngelixa amandla okunyusa angenza imimangaliso ngokucacileyo xa imarike ihamba ngendlela yakho - inokwenza nkulu ilahleko yakho.
Apho unokuthenga i-Ethereum
Xa ujonga indlela yokuthenga i-Ethereum, inkqubo yokucinga yendalo isisa apho. Njengoko besesitshilo, ungathenga i-crypto-asethi ngotshintshiselwano olungalawulwayo, okanye ngokukhethekileyo nge-trust ethembekileyo iqonga lokurhweba.
Thenga iKhadi lokuTsala le-Ethereum
Uninzi lwabarhwebi banamhlanje luya kukuvumela ukuba uthenge i-Ethereum usebenzisa ikhadi lebhanki. Ngale nto ithethwayo, kubalulekile ukuba wazi ukuba oku kunokuza ngentlawulo, kuxhomekeke kwiqonga.
I-eToro ichazwe njenge-USD. Kananjalo, uya kuhlawuliswa imali encinci yotshintshiselwano ye-0.5% ukuba awufaki mali kwiidola zaseMelika. Ngokwahlukileyo, iCoinbase ibiza umrhumo we-3.99% kuyo yonke intengiselwano yamakhadi etyala. I-Binance kwelinye icala ihlawulisa kwenye indawo kuluhlu lwe-3% ukuya kwi-4%, kuxhomekeke kwindawo okuyo.
Thenga iKhadi letyala le-Ethereum
Olunye ukhetho kukuthenga i-Ethereum usebenzisa ikhadi lamatyala. Yazi ukuba ngamanye amaxesha kukho imiqobo embalwa kule ndlela yokuhlawula. Okokuqala, ezinye iinkampani zamakhadi etyala zihlawulisa imali engaphambili kwengingqi ye-3-5%. Ngapha koko, unokufumanisa ukuba umnikezeli wekhadi lakho akavumeli ukuthengwa kwe-cryptocurrency.
Kwa-eToro-okoko nje ubeka imali kwiakhawunti yakho usebenzisa iidola zaseMelika - awuzukuhlawuliswa nesenti xa uthenga kwaye uthengisa ngekhadi letyala. Ukuba ayiyiyo i-USD, ke umrhumo uyi-0.5% kuphela.
Thenga i-Ethereum Paypal
Ngaba uyazi ukuba unokuthenga i-Ethereum nge-PayPal? Ngale nto ithethwayo, isikhokelo sethu safumanisa ukuba abathengisi baninzi bayalwamkela olu hlobo lokuhlawula.
Nangona kunjalo, kwi-eToro ungafaka kwaye uthenge i-Ethereum usebenzisa le e-wallet idumileyo ngonqakrazo lweqhosha. Ngapha koko, kukuma ixesha elide crypto yorhwebo iqonga le-AvaTrade liya kukunceda ukuba ubeke imali nge-PayPal. Ungarhweba nge-Ethereum CFDs ngaphandle kwekhomishini.
Kukho phantse i-20,000 XNUMX ye-crypto ATM kwihlabathi liphela. Ngelixa abanye bebonelela ngeBitcoin-uninzi lukuvumela ukuba uthenge i-Ethereum. Ukucacisa, oomatshini abaqhelekileyo bemali esisebenzisa ukukhupha imali ebonakalayo bayahluka ngandlela thile kwiiATM ze-Ethereum.
Ngokukodwa, endaweni yokwenza ukurhoxa kwe-fiat-uyakufaka imali kurhulumente njengeedola zaseMelika okanye i-euro kumatshini ukuze uthenge i-cryptocurrensets. Emva koko, uya kukhetha imali ofuna ukuyithenga, ubeke imali yakho kumatshini kwaye iinkozo zedijithali ziya kongezwa kwisipaji sakho se-crypto.
Ngokukodwa, oku kuthathwa njengenye yeendlela ezibiza kakhulu zokuthenga i-Ethereum, ubukhulu becala ngenxa yemali yokuhlawulisa ikhomishini. Kuxhomekeka kwindawo ekuyo i-ATM- oku kunokuba ngaphezulu kwe-10% yokuthenga kwakho i-crypto.
Ngaba ukhe wacinga malunga nobuchwephesha kunye nezicwangciso ze-Ethereum onokufuna ukuzongeza kwisakhelo sakho? Oku kunokubandakanya iindleko zeedola, okanye mhlawumbi ukusebenzisa imiqondiso ye-crypto ukunciphisa ijika lokufunda.
Ixabiso leDola- avareji
Esinye sezona zicwangciso zidumileyo nezithe ngqo zokutyala imali kukuphumeza iindleko zeedola. Ukuqala, cinga malunga nemali onokuyenza okanye ongathanda ukuyinikela ekuthengeni i-Ethereum. Oku kunokwenziwa ngeveki, okanye ngenyanga.
Umzekelo, unokuthatha isigqibo sokubeka bucala i-100 yeedola ngenyanga ukuthenga i-Ethereum, ukuchitha i-25 yeedola ngeedola zemali. Umbono kukwakha ipotifoliyo yakho yotyalo-mali ngokuthe chu, endaweni yokuvuthela yonke into kwiakhawunti yakho kwinto enye oyithengileyo.
Kukho intetho phakathi koluntu olutyalayo / lokurhweba - "ungabambi imela ewayo". Oku kuthetha ukuba kuya kufuneka ubambe kude kube lixabiso liphume.
Nangona kunjalo, oku akufuneki kubhidaniswe 'nokuthenga idiphu' - eya kuthi ikubone ubandakanya inkqubo yokulinganisa indleko ngexabiso xa i-Ethereum iphakathi kokuhla kwexabiso elibukhali- kunye / okanye ukuyithenga xa izinto zizinzile.
Kuza kuthi ukuba ixabiso le-Ethereum lehle kakhulu ukusuka kwi-11,709 9,601 yeedola ukuya kwi-XNUMX XNUMX yeedola
Oku kubonisa ukwehla ngexabiso nge-18%
Kananjalo uqala ukuthenga i-Ethereum encinci kwaye rhoqo njengoko ixabiso liqhubeka nokuhla
Njengoko ubona, ngokuthenga idiphu uya kuba kwindawo engcono yokwenza inzuzo - xa iimali zemali zedijithali ngokuqinisekileyo zikhuphuka kwixabiso elingaphezulu komgca. Ngaphandle koko, abanye abarhwebi kunye nabatyali mali bakhetha ukubamba kude kube yimarike izinze.
Ngokwepotifoliyo yakho yotyalo-mali, ukwahluka-hlukana ayisiyondlela yokunyusa imbuyekezo yakho kuphela, kodwa ikwachasene nokuguquguquka kwemarike. Ukuqhubeka nokucacisa, ungaqala ngokujonga ukuthenga i-Ethereum kuphela-kodwa oku kuthetha ukuba uyakuboniswa kwintengiso enye ukuba ibe ngcono okanye ibe mbi.
Ngenye indlela, ungawunciphisa umngcipheko ngokubandakanya ezinye iimali zedijithali ezinje ngeRipple, iBitcoin Cash, iPolkadot, njalo njalo. Ngale nto ithethwayo-enye yeendlela ezilungileyo zokwahlula iphothifoliyo yakho kukongeza iiasethi ezahlukeneyo ngokupheleleyo.
Into ecaleni kwemigca yegolide okanye isitokhwe. Olu lukhetho oludumileyo kuba baziphatha ngendlela eyahlukileyo kwiimali zedijithali. Ngokusasaza utyalo-mali lwakho kwiiklasi ezahlukileyo zotyalo-mali, ukuba iasethi enye ayisebenzi kakuhle, ukusebenza kwayo kakubi kuya kulungiswa yimpahla esebenza kakuhle.
Elinye icebo eliluncedo lokubandakanya ziimpawu zorhwebo. Njengoko siphumile, oku kuyakusindisa kufuneka ufunde okuninzi ngaphambi kokuba uqalise. Akukho mfihlo yokuba uhlalutyo lobuchwephesha ludlala indima ebaluleke kakhulu kurhwebo lwe-cryptocurrency, nangona kunjalo, ingxaki kukufunda kungathatha ixesha elide.
Iimpawu zorhwebo ze-Ethereum zifana neengcebiso. Umqondiso ngamnye uya kuhlala ubandakanya iasethi eza kuthengiswa, nokuba ihambe ixesha elide (ithenge) okanye imfutshane (ithengise), kunye neengcebiso zokuba yeyiphi na imilinganiselo emiselweyo yokuhambisa ixabiso. Ezona nkonzo zibalaseleyo zomqondiso ziya kubandakanya ukulahleka kokuyeka kunye nomyalelo wenzuzo. Ukubeka ngokulula, iqela labarhwebi abanamava kunye nabahlalutyi bajonga iimarike ngamathuba okwenza imali kunye nokwabelana ngeziphumo.
Rhoqo kunokuba oku kwenziwa nge-imeyile yomyalezo we-encrypted. Apha kwi-Learn 2 Trade, sinikezela simahla Iimpawu zorhwebo ze-Ethereum, kunye nenkonzo yePremiyamu ngesiqinisekiso sokubuyiselwa imali kwiintsuku ezingama-30.
Uyithenga njani i-Ethereum ekwi-Intanethi-UkuHamba okupheleleyo
Ngeli nqanaba kwisikhokelo sethu, unokuziva ulungele ukuqalisa. Ukuba utyalile okanye wathengisa ngaphambili-eli nxalenye liya kuhlala liqhelekile.
Kwabo bangenamava kwisithuba-jonga ukuhamba okupheleleyo ngezantsi kwendlela yokuthenga i-Ethereum namhlanje! Sisebenzisa i-Capital.com kumzekelo wethu, njengoko umrhwebi olawulwayo ekuvumela ukuba uthenge i-Ethereum yekhomishini yasimahla kwaye ubuncinci bokuthenga yi- $ 25 nje.
Inyathelo 1: Bhalisa nge-Ethereum Broker
Intloko ngaphaya kwiwebhusayithi eyi-Capital.com kwaye ucofe u-'Joyina ngoku '.
Ngoku ungagcwalisa ibhokisi yokubhalisa ngokufanelekileyo. Njengoko ubona oku kubandakanya igama lakho, i-imeyile- kunye neemfuno eziqhelekileyo ze-KYC.
Inyathelo 2: Ngenisa iZazisi ezithile
Kuya kufuneka ukuba unikezele ngobungqina besazisi. Le isenokuba liphepha-mvume lakho lokuqhuba, ipaspoti, okanye kwezinye iimeko ikhadi lesazisi.
Ukubonisa idilesi yakho, umrhwebi uyakwamkela ingxelo yebhanki yakutshanje okanye ityala elisebenzisayo. Qaphela, eli nyathelo linokugqitywa emva komhla- kodwa kufuneka ube ngaphambi kokuba ucele ukurhoxa okanye ubeke imali eyi- $ 2,250 okanye nangaphezulu.
Inyathelo 3: Iimali ezifakwa kwiAkhawunti yakho
Ngoku lixesha lokuba ubeke imali ukuze ukwazi ukuthenga i-Ethereum.
Faka imali onqwenela ukuyithenga uze ukhethe indlela oyikhethayo yokuhlawula. Kukwabalulekile ukujonga ulwazi olufakileyo- ngaphambi kokucinezela 'iDiphozithi'.
Inyathelo 4: Thenga i-Ethereum
Sebenzisa umsebenzi webar yokukhangela ukufumana i-Ethereum, okanye ucofe 'kwiiMarike zoRhwebo' kwaye uya kuyibona idweliswe phantsi kwe 'Crypto'.
Jonga lonke ulwazi olukwibhokisi yoku-odola kwaye ubethe 'Misela iOda. I-Capital.com iya kuthi emva koko ikwenzele ukuthengwa kwe-Ethereum-ngaphandle kwekhomishini!
Akuzange kube lula ukuthenga i-Ethereum kwinduduzo yekhaya lakho. Unokuthanda ukutyala imali ngokuthe ngqo, okanye ukurhweba ngeCFDs. Ngomrhwebi ohloniphekileyo kwicala lakho ukwenza iiodolo kunye nokubonelela ngokufikelela kuluhlu lweeasethi- uya kuba ngowokuqala kokusemandleni.
Cinga malunga neenkqubo ekufuneka zibandakanyiwe kwisicwangciso sakho- esinokubandakanya ukuthenga idiphu, okanye iindleko zeedola. Unokujonga kwakhona ukuhlanganisa ngokutyala kwezinye iiasethi ezinje ngestokhwe, ioyile, okanye igolide.
Le yeyona ndlela ilungileyo yokunciphisa umngcipheko obandakanyekayo xa ujolise kudidi olunye lweeasethi. Okokugqibela, igama kwizilumko-soloko usebenzisa umrhwebi olawulwayo ukuthenga i-Ethereum. I-Capital.com lukhetho olukhulu apha - njengoko iqonga likuvumela ukuba utyale imali kwi-ETH ngaphandle kwekhomishini nakwindawo encinci ye- $ 25!
Ixabisa malini ukuthenga i-Ethereum?
Impendulo ixhomekeke kubarhwebi ekuthethwa ngabo. Umzekelo, kwi-eToro, ungathatha inxaxheba kutyalomali lwamaqhezu. Oku kuthetha ukuba uyakwazi ukutyala imali kwi-Ethereum ukusuka kwi- $ 25. Ukuba imali epheleleyo ye-ETH yi- $ 1,820, utyalo-mali lwakho lwama- $ 25 lithetha ukuba ungumnini weepesenti ezi-1.4 zemali.
Yimalini i-Ethereum ekufanele ukuba ixabiseke kwiminyaka emi-5?
Uphando olupapashiweyo lubonisa ukuba ingqekembe inokufikelela kwixabiso elingaphezulu kweedola ezili-16,000 kwiminyaka emi-5. Nangona kunjalo, ukuba ezo zibikezelo beziyinyani, besiya kuba zizityebi sonke. Ngokwenza uhlalutyo lobuchwephesha kunye nokuphanda ngexabiso ledatha- uya kufumana ukuqonda okucacileyo kokuba imali inokuba yeyiphi kwiminyaka emi-5.
Yeyiphi indawo efanelekileyo yokuthenga i-Ethereum?
Isikhokelo sethu sifumanise ukuba eyona ndawo yokuthenga i-Ethereum ikumgangatho ophezulu wokurhweba eToro. Iqonga kulula ukulisebenzisa kwaye likwenza ukuba ukwazi ukuthenga nokugcina ii-cryptocurrensets ngaphandle kwekhomishini kwaye ngaphandle kwentlawulo. Ngokubalulekileyo, umrhwebi ulawulwa yi-FCA, ASIC, kunye neCySEC.
Ndingayithengisa njani i-Ethereum yam?
Eyona ndlela ilula yokuthengisa i-Ethereum kukudlula kumthengisi onje nge-eToro. Kungenxa yokuba kunye nokuthenga i-crypto-asethi apho, uya kubagcina ngokukhuselekileyo. Xa uziva ukulungele ukuthengisa-yenza ngokulula i-odolo 'yokuthengisa' kwaye umrhwebi uya kongeza imali kwiakhawunti yakho yorhwebo.
Ngaba i-Ethereum inokukwenza ube sisityebi?
Abanye abantu bakholelwa kwelokuba eyona ndlela yokwenza inzuzo kwi-Ethereum kukwenza isicwangciso sokuthenga nokubamba. Oku kuyakubona uthenga i-Ethereum kwaye uyithengisa kamva ezantsi emgceni- ngokubalulekileyo xa inyuke kakhulu ngexabiso.